ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုယခုပွင့်လင်းကြသည်။ ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလုပ်သားများအဘို့အထူးဒီဇိုင်းဆောင်းပါး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအင်ဒီးယန်းကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အင်ဒီးယန်းများနှင့် ပါကစ္စတန်အလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်နိုင်ခြေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူသငျသညျအခွင့်အလမ်းများရရန်မည်သို့ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများကအထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်နာလမ်းညွှန်အတူ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအားမရကျွမ်းကျင်သူများ။ နှင့်ဤအတူကျနော်တို့ကူဝိတ်အတွက်အားမရနေကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကငှားရမ်းသည်။ ယခုမှာအကြှနျုပျတို့ကူဝိတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အများအပြားသစ်ကိုကန်ထရိုက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုကြိုးစားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်သည်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအကြံပေးချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ပေး။ ထိုအခါကြောင်းနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အစေခံရန်ဆက်လက်ဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်နှင့်အတူကူညီခြင်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကူဝိတ်အလုပ်သမားတွေအတွက်အံ့သြဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါဆန့်ကျင်ပေါ်, အများကြီးရှိပါတယ် ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ငါတို့သည်သင်တို့အားမရမျှော်လင့်နေကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အကန်ထရိုက်စကားပြော။ 2010 ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီမှကျော်စီးဆင်းစတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်သိရသည်။ ပြီးတော့ကတည်းကကျနော်တို့ကူဝိတ်နှင့်သင်တန်း၏ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဒီးယန်းအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကိုစတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည် အလုပ်ဈေးကွက်ရောက်ရှိဖို့အလုပ်မုဆိုးသွားလာရန်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးဆင်းမှုကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ extensionally စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ငါတို့သည်ယူအေအီးအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များလူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့များအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို.
ကူဝိတ်အတွက်သင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်။ တော်တော်များများရှိပါတယ် မကြာခဏအလုပ်ရှာဖွေသူများအားဖြင့်သတိမမူကြသည်မဟုတ်အရေးကြီးသည်ဖြစ်ရပ်မှန်များ။ ဥပမာအားဖြင့်, မှားသဘောထားကိုအဖြစ်ဆင်းရဲသောသူသည်, ထိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ၏အမည်တူပင်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက် စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ။ ထိုအပင် updated ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားတဲ့သို့မဟုတ်မ အလုပ်လျှောက်လွှာသို့အီးမေးလျ။ တူရိုးရှင်းသောအမှားတွေကို။ ယေဘုယျအားဖြင့်မအောင်မြင်အိန္ဒိယကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလျှောက်လွှာအောင်, စကားပြော။
ပြည်သူ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်ရှာနေနေကြသည်။ နှင့် အလုပ်ရှာတွေ့၏ရည်ရွယ်ချက် ဘာမှလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်အများအပြားရမှတ်၏အဝိဇ္ဇာ။ ကျိန်းသေသင့်ရဲ့အလုပ်အသုံးမပြုတဲ့ရှာဖွေနေအောင်။ ထိုအတကယ်တော့, ဒီဆောင်းပါးထဲမှာကျနော်တို့အကြောင်းပြချက်ဖော်ပြရန်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးအလုပ်ရှာဖွေသူများအခက်အခဲရင်ဆိုင်ရလေ့ ကူဝိတ်မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်? အင်ဒီးယန်းကိုသာရှိပါသည်။ သင်သည်တတ်နိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရိုးရှင်းသောအဖြေကိုနှင့်မေးခွန်းများကိုရှာတွေ့.
ကူဝိတ်တွင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ။ အသစ်လုပ်များအတွက်ထူးချွန်ဆုံးရွေ့လျား၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ထို့အပွငျအများကြီးရှိပါတယ် ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယကနေလူတွေ။ နှင့်ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်အလုပ်လုပ်ကဤစိတျထဲတှငျ, အတူ။ ကျိန်းသေထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှိပါတယ် ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်တော်တော်များများအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ5ထက်ပိုရှိပါတယ် ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယေဘုယျအားဖြင့်အလားအလာရှိသောလုပ်သားများကူညီပေးနေစကားပြောခြင်း။ အဘို့အကူဝိတ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသောကြောင့် အိန္ဒိယဆရာ။ တစ်ဦးအတော်လေးခက်ခဲသဘောတူညီချက်စီမံခန့်ခွဲရန် Seams ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်နေရာချကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလားအလာအလုပ်သမားလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကို upload လုပ်သင့်ပါတယ်။ အင်ဒီးယန်းကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်ရှာဖွေနေလို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
Fahaheel al-Watanieh အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကျောင်းများ
ဒါကြောင့်, စုံလင်သောငှားရမ်းအေးဂျင့်ကိုရှာနေတာလား?။ ပထမတော့သင်ကသူတို့ကိုမြင်နိုင်စေရန်ရှိသည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ?။ ယေဘုယျအားဖြင့်သတိပြုမိဖို့, စကားပြော။ အလုပ်ရှာဖွေသူများလိုအပ်ပါတယ် တပ်သားသစ်များ၏အာရုံကိုဖမ်းရန်။ ကသင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ။ ဒါဟာတကယ်မူတည်ပါသည်။ အချိန်ကိုအချိန်ဇယားတွင်။ သောကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ၏ဦးတည်မူတည် ပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်အကိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေ.
အလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ 100 CVS န်းကျင်ထွက်ပေးပို့ခြင်းရဲ့ကရင်ဆိုင်ရကြပါစို့။ အဖုံးအက္ခရာများ၏ 30 ထက်နှင့်ပိုပြီး ငှားရမ်းမန်နေဂျာမှ။ ထိုမှတပါး, အဆိုပါ website တွင်လုပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း applications များ။ ထိုအခါပြန်လည်စတင်များနှင့်လျှောက်လွှာအလုပ်ရှင်များမှခံစားခဲ့ရ။ နှင့်အဆုံး၌, အလုပ်ရှာဖွေသူများသာတုန့်ပြန်၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူစိတ်ပျက်ခံရဖို့။ ထိုအခါသင်ဤကျိုးကြောင်းညီညွတ်ပါလိမ့်မယ် စိတ်ပျက်သင်၏ဦးခေါင်း၌ရှိ၏။ တဖန်သင်တို့ရှာဖွေကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အင်ဒီးယန်းပြန်လည်စဉ်းစားရပေမည်။
သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာ compleated မပေးပါ။
ဒီတစ်ခါလည်း applications များသုံးသပ်ပြီးသူထမ်းရှာဖွေသူမရရှိနိုင်။
Undelivered သတင်းစကား သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖိုင်နှင့်အတူ.
ဒီတစ်ခါလည်းမှားဖွဲ့သောအရာတစ်ခုခု, လိပ်စာ, စာလုံးပေါင်းအမှားများဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်ကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့ပေါင်းများစွာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အမှန်တရား, ဤသည်ကားလူဖြစ်ကြ၏ အေးဂျင့်များငှားရမ်းဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်း။ နှင့်ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်။ သေချာဘို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေစုဆောင်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရှာနေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျငါအလုံအလောက်ကောင်းသောတယ်ထင်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အမှုအရာတွေအများကြီးရှိသေး၏။ တဦးတည်းတကယ်တော့သေချာဘို့ဖြစ်၏, အ မန်နေဂျာငှားရမ်းလူသစ်သုံးဖြုန်းခြင်းနှင့်ငှားရမ်းရန်ပိုက်ဆံရှိပါတယ် ကူဝိတ်၌တည်၏။
သူတို့ကအစက်အပြောက်ပေါ်တွင်သင်မခေါ်ခဲ့ဘူးအကြောင်းပြချက်။ သင့်ရဲ့နိမ့်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်, ယ့် CV ကိုမပို့။ နောက်ထပ်ဥပမာသင်ကအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံ။ သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့လိုက်တဲ့အခါ သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်ကိုဖုံးလွှမ်း။ သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်မဆိုလမ်းထဲမှာကသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းမဟုတ်ဘဲစကားပြောနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတံဆိပ်၏နောက်ထပ်ခြမ်းသင်သည်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းထိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာဘို့အရာတစျခုသည်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများကောင်းသောပညာရေး, ပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေသို့မဟုတ်အခြားအပေးအယူမရှာကြဘူး။ သူတို့ကသာငွေရှာစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ကူဝိတ်အတွက်အွန်လိုင်း, သို့မဟုတ်လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခါသင်ကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသူများအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ဦးယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ သငျသညျကျိန်းသေရန်လိုအပ်ပါတယ် အလုပ်ရှင်များနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာစည်းရုံး။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း, သင်တန်း, ရန်ဖြစ်ပါသည် အလားအလာလုပ်သားအဖြစ်သူတို့ကိုရန်သင့်မိမိကိုယ်ကိုရောင်းချ.
သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုဝယ်ယူသင်၏ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့အလှည့်စား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လုပျဆောငျဖို့လိုအပျပထမဦးဆုံးအရာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်လျှင်, စကားပြော အလားအလာရှိသောအလုပ်သမား တဦးတည်းလယ်ပြင်၌ရှိသောအထူးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကြောင်းအလုပ်လုပ်ရာဌာန၌တစ်ဦးသက်ရောက်မှုပြုလုပ်ခြင်း။ ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းကသင့်ကြောင်း အတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးသူတို့ကိုပိုက်ဆံဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
ဒုတိယအပြောင်းအရွေ့, ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့စျေးကွက်စစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင်, သင့် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း application ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထူး.
တတိယအချက်အလုပ်ရှင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုဝန်ထမ်းရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံသင့်လျှောက်လွှာအထူးပြု post ။
ကူဝိတ်အတွက်ဝန်ထမ်းဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်။ သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ နှင့်ကူဝိတ်အတွက်စစ်ဆေးမှုများဖြစ်နိုင်ခြေသေချာသည်။ ပဌမ Google လည်းကူဝိတ်ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့။ နှင့်အခြားသောကုမ္ပဏီများသည်။ ကဲ့သို့ သောအစက်အပြောက်ပေါ်တွင်သင်ငှားရမ်းစေခြင်းငှါ။ ဒါကြောင့်, ကူဝိတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အင်ဒီးယန်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစား အရှေ့အလယ်ပိုင်းအဘို့သင့်အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှု.
ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး အရေးအပါဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုအသုံးချနိုင်သလဲ ပြီးတော့တစ်ဦးအဖြစ်ကူဝိတ်အတွက်ဘုရားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုဝင်ငွေ အိန္ဒိယကနေပြည်ပရှိ။ စိတ်၌ဤအတူလွတ်လပ်စွာအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားပါ။ မြန်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်။ ပြီးတော့မဆိုလူတစ်ဦး၏အကူအညီမပါဘဲ။ မင်းလုပ်နိုင်မှာပါ ထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီအပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပိုင်းကြည့်ရှိသည်။ ထိုအရရန်ကြိုးစား အဖြစ်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ပေးထားပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။